UTrump angaguqula umqondo wakhe ngokushintsha kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Donald Trump uba ngumlingiswa othandwa kakhulu, ezindaweni eziningi. Kepha ngaphandle kokungabaza into eyayikhathaza kakhulu ukuthi wanquma ukuthi izwe lakhe alihlangene neSivumelwano SaseParis. Kodwa-ke, manje isimo singashintsha, futhi.
Le ndoda, engabazayo ngokushintsha kwesimo sezulu nakho konke okuphathelene nalolu daba, iqinisekise uMongameli waseFrance u-Emmanuel Macron ukuthi Ngizozama ukuthola isisombululo ezinyangeni ezimbalwa ezizayo. Ingabe kuliqiniso? Asazi. Kepha kusenelukuluku lokuthi ushintshe umqondo wakhe, uma ewenzile ngempela, ngesikhathi esifushane kangaka.
Isivumelwano SaseParis, esasayinwa amazwe ayi-195 ngoZibandlela wezi-2015 futhi savunywa kuze kube manje ngama-26, saba ngumlando oyingqophamlando. Isikhathi lapho kwakubonakala sengathi izinto ekugcineni zizoqala ukuba ngcono futhi kuzothathwa izinyathelo ezisebenza ngempela ukunqanda ukuguquka kwesimo sezulu. Kodwa izinto zonakala lapho uDonald Trump, umongameli wamanje wase-United States, umemezele ukuphuma kwezwe lakho Esivumelwaneni saseParis ekuqaleni kukaJuni 2017.
Abanye abamangazanga, ngoba uTrump ubelokhu ecacisile njalo ngezinhloso zakhe. Eqinisweni, ngokusho kwe- El País Osukwini lwakhe, yena lo mongameli wabhala kweyakhe I-akhawunti ye-Twitter ibinzana elilandelayo: umqondo wokufudumala kwembulunga yonke wenziwa futhi amaShayina enza ukukhiqizwa kwe-US kungabi nokuncintisana. Manje kwenzekani manje?
Ngomqondo wakhe ngeshwa asazi nhlobo. Ingabe uwushintshe ngempela umqondo wakhe? Ingabe kuyisu lokuzama ukuthola abalandeli naseYurophu? Okwamanje, esingakusho ukuthi, phakathi nengxoxo phakathi kukaMacron noTrump, owokugcina ukusho lokho Lesi sivumelwano sibeka le mboni engcupheni futhi sisaxegisa amazwe amakhulu angcolisa umhlaba, njengeChina ne-India.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » UTrump angashintsha umqondo wakhe ngokushintsha kwesimo sezulu